သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၄) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 9:29 PM | No မှတ်ချက် |
အာဖဂန်နစ္စတန် မြောက်ပိုင်းတွင် အရေးပါသည့် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအပါအဝင် စစ်သွေးကြွ ၁၀ဦး ကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့
မိုးသီးဒဏ်ခံရမည်စိုး၍ မှည့်ဆေးသုံးသောအသီးများကြောင့် စားသုံးသူ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ရ
ရေသွားလှူသည့် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး ချောက်ထဲလှိမ့်ကျရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး
မိုးသီးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း မုိုး/ဇလ သတိပေး
ပြည်ပခရီးစဉ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် မရှိ်ဘဲ ဆောင်ရွက်နေသော ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများကို မေလမှ စတင် အရေးယူသွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် မေလ ဒုတိယပတ်၌ မုတ်သုံ စတင်ဝင်မည်
လှိုင်သာယာ၌ အရွယ်မရောက်သေးသူအား အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်တစ်သိန်းခန့်ကို ထိုင်းအစိုးရ နေရပ်ပြန်ပို့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
ရိုဟင်ဂျာ လို့ခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ရှင်းလင်း
ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကြောင့် အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
အီးယူက မြန်မာကို တစ်နှစ်ကြာ လက်နက်ဒဏ်ခတ် ဆက်ပိတ်ဆို့
တူရကီနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အသေခံ ဗုံးခွဲမှုကြောင့် ၁ ဦး သေဆုံး၊ ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ဝေါမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေပြတ်လပ်မှု အဆိုးဝါးဆုံး ကြုံတွေ့နေရသော ကျေးရွာ ၂ ရွာ ရေအလှူရှင်များ လိုအပ်နေ
ISIS အဖွဲ့က ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းတွင် အခြေစိုက်ရန် ပစ်မှတ်ထား
ISIS အဖွဲ့၏ ငွေသားအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ခန့်ကို လေကြောင်းမှ ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့
လင်ဖြစ်သူမှ ဇနီးဖြစ်သူအား ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသတ်မှု တနင်္သာရီမြို့၌ ဖြစ်ပွား
JMC ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးစဉ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တရားရုံးတွေ စောင့် ကြည့်ရေး ဆွေးနွေး
မတရား ကျူးလွန်ခံရသူ အမျိုးသမီးများအမှု အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရန် SWAN တိုက်တွန်း
၂ နှစ်အတွင်း သစ်တော ဧရိယာ ဟက်တာ တစ်သန်းခွဲ လျော့နည်းသွား
ကန်-မြန်မာဆက်ဆံရေး သံအမတ်သစ် Marciel တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်
ဧရာဝတီမြစ်ရေတိုးလာ၍ ကသာမြို့နယ်အနီး စိုက်ပျိုးထားသော မြေပဲခင်းများ ရေမြုပ်
ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ပြန်ရွေးမယ်
Posted: 28 Apr 2016 06:39 AM PDT
တာလီဘန် စစ်သွေးကြွများအားတွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်) ကဘူးလ်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဖဂန်နစ္စတန် မြောက်ပိုင်း Kunduz ပြည်နယ်တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၏ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရေးပါသည့် တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအပါအဝင် လက်နက်ကိုင် စစ်သွေးကြွ ၁၀ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန က ဧပြီလ ၂၈ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အစိုးရ တပ်
Posted: 28 Apr 2016 06:24 AM PDT
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်တွင် မိုးကုတ်မြို့နယ် ဓာတ်တော်တောင်ဒေသ တွင်းအမှတ်(၁)၌ တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည့် န၀တပတ္တမြားကြီး ယခုအချိန်မည်သည့်နေရာ၌ ရောက်ရှိနေသည်ကို ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပတ္တမြားကြီးဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည့် အလေးချိန် ၅၀၄ ဒသမ ၅၀ ကာရက်ရှိ န၀တပတ္တမြားကြီး သည် နေပြည်တော်ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်၌ မရှိကြောင်း ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူတဦးက News Watch သို့
Posted: 28 Apr 2016 06:21 AM PDT
မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် မိုးသီးကျရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အချို့ဒေသ၌ သီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမည်ကိုကြောက်သဖြင့် သစ်သီးအမြန်မှည့်ဆေးသုံးခြင်းသည် စားသုံးသူကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က News Watch သို့ ပြောသည်။ ၎င်းဆေးတွင်ပါဝင်သော အီတိုင်လင်းဓာတ်ကြောင့် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ လေငန်းဖြတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တ
Posted: 28 Apr 2016 06:14 AM PDT
တာချီလိတ်၊ ဧပြီ(၂၈) ရှမ်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ပိုင်းဒေသ၊ တာချီလိတ်မြို့တွင် အလင်းရောင်ပရဟိတ အသင်းမှ ဘုန်းကြီးကျောင်း အတွက် ရေသွားလှူရာ ကုန်မြင့်၍ ရေ၀ိတ်ကြောင့် ကားမတက်နိုင်ဘဲ ကားနောက်ပြန် လှိမ့်ကျရာမှ ကားချောက်ထဲပြုတ်ကြပြီး အသင်းဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက တာချီလိတ်မြို့ တောင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သည့် ကိုးသောင်း ကိုးထောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့
Posted: 28 Apr 2016 05:48 AM PDT
ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၄း၃၀)နာရီအချိန် မိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်များအရ အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့မှ ရွေ့လျားလာသော လေပွေလှိုင်းများ၏ အရှိန်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်၍ လေထုမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် လည်းကောင်း(၂၉.၄.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၅.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်
Posted: 28 Apr 2016 05:24 AM PDT
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာနေသော ခရီးသွားများအား တွေ့ ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန် ၊ ဧပြီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ပြည်ပခရီးစဉ် (Outbound Tour) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိ်ဘဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများအား မေလမှ စတင်၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေး လုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချို့သော ခရီးသွားကုမ္ပ
Posted: 28 Apr 2016 05:17 AM PDT
ရန်ကုန်မြို့တွင် မိုးရွာသွန်းမှုအား မြင်တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) မိုးဦးကာလ ရောက်ရန် တိုက်ခတ်သည့် အနောက်တောင် မုတ်သုံလေသည် မေလ ဒုတိယပတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းသို့ စတင် ဝင်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ဇွန်လ ဒုတိယ ပတ်တွင်တော့ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ အနောက်ေ
Posted: 28 Apr 2016 05:11 AM PDT
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ နမူနာ ဓါတ်ပုံသာ ဖြစ်ပါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် လှိုင်သာယာမြို့ နယ် အမှတ်(၂ဝ)ရပ်ကွက် သောင်ကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင်တွင် အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ဦးက ဖြားယောင်း သွေးဆောင်ကာ တည်းခိုခန်းတစ်ခု၌ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ယခုလ ၂၄ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ တရားလို ဖြစ်သူ ဦး.... (၃၅နှစ်)သည် မင်းရဲကျော်စွာ(၁ဝ)လမ်း (၂ဝ)ရပ်ကွက် လှိုင်
Posted: 28 Apr 2016 04:59 AM PDT
ဧပြီ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်။ စအိုင်ဆူး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်း ၃ခုဖြစ်သော မယ်လ၊ နို့ဖိုးနှင့် အုန်းဖျန်တို့ရှိ ဒုက္ခသည်တစ်သိန်းခန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ နေရပ်သို့ ပြန်ပို့မည့်ဟု ထိုင်းအစိုးရဘက်မှ ပြောဆိုနေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လတ်တလော သတင်းမီးဒီယာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတင်းပေါ်ထွက်လျှက်ရှိသည်။ ဧပြီ ၂၇ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်၊ မဲဆောက်မြို့နယ်ရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ခ
Posted: 28 Apr 2016 04:24 AM PDT
(မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel ကို ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်) Photo: Htet Arkar/RFA မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel က အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာဟာ နိုင်ငံရေးအရမဟုတ်ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက သူတို့ကို ဘယ်လိုအမည်နဲ့ ခေါ်ပါလို့ တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အသိအမှတ်ပြုခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန်သံရုံးမှာ တွေ့ဆုံစ
Posted: 28 Apr 2016 04:19 AM PDT
အမေရိကန် သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ ထုတ်ဖော်သူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန် သံရုံးထုတ်ပြန်သော ထုတ်ပြန်ချက်၌ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု ထည့်သွင်း သုံးစွဲမှုအပေါ် လူ ၃၀၀ ကျော် ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်တွင် သံရုံးရှေ့၌ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အမေရိကန် သံရုံး ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများကို ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဟု ဖော်ပြမှု အပေါ် အမျိုးဘာသာ
Posted: 28 Apr 2016 04:16 AM PDT
ဥရောပ သမဂ္ဂ အမှတ်တံဆိပ် (Credit: ABC) ဥရောပ ​သမဂ္ဂ ​အီးယူက ​မြန်မာနိုင်ငံကို ​လက်နက် ​တင်ပို့ ​ရောင်းချခွင့် ​တစ်နှစ်ကြာ ​ဆက်လက် ​ပိတ်ပင်ဖို့ ​ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအပေါ် ​လက်နက် ​ရောင်းဝယ်ရေး ​ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို ​၂၀၁၇ ​ခုနှစ် ​ဧပြီလ ​၃၀ ​ရက်နေ့အထိ ​ဆက်လက် ​ချမှတ်မှာ ​ဖြစ်ပေမယ့် ​အန္တာရာယ်နည်းတဲ့ ​စစ်သုံးပစ္စည်းကိုတော့ ​ရောင်းဝယ်ခွင့် ​ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဖိနှိပ်ရေးတွေမှာ ​အသုံးပြုနိုင်မယ့် ​စစ်
Posted: 28 Apr 2016 04:11 AM PDT
အသေခံဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် Ulu ဗလီ နားသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဆင်ဟွာ) အစ္စတန်ဘူလ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) တူရကီနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း Bursa မြို့တွင် ဧပြီလ ၂၇ ရက်က အသေခံ ဗုံးခွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့၍ အသေခံ ဗုံးခွဲသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြား ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း တူရကီ မီဒီယာ က ဖော်ပြခဲ့သည်။ Bursa အစိုးရရုံးက အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်သူ အမျိုး
Posted: 27 Apr 2016 10:25 PM PDT
ပဲခူးခရိုင် ဝေါမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေပြတ်လပ်မှု ကြုံတွေ့နေရသော ကျေးရွာ ၂ ရွာသို့ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သောက်ရေပေးပို့ လှူဒါန်းမှုရှိနေသော်လည်း သောက်သုံးရေ လောက်ငှမှုမရှိသဖြင့် ပြင်ပ ရေအလှူရှင်များ လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ ဝေါမြို့နယ်၊ ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာနှင့် ဖိုးစိန္တာစုကျေးရွာတွင် ရှိသော သောက်ရေကန်များမှာ မတ်လမှစတင်၍ ခန်းခြောက်နေခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် တုံကင်ရေတွင်းများမှလ
Posted: 27 Apr 2016 10:15 PM PDT
၀ါရှင်တန် ၊ ၂၈-၄-၂၀၁၆ ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့သည် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှ ရှုံးနိမ့်မှုဖြင့် ထွက်ခွာရပါက ၄င်းတို့၏ နယ်နိမိတ်ကို တိုးချဲ့ရန် ဗဟိုအစိုးရ ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းသော ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အခြေစိုက် နိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ဖြစ်သည့် The Soufan Group (TSG) က ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန် ထားသည်။ လက်ရှိ အချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်း အပါအဝင် အိ
Posted: 27 Apr 2016 10:12 PM PDT
လန်ဒန် ၊ ၂၈-၄-၂၀၁၆ အမေရိကန် ဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့သည် ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်သော ငွေသား အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈ဝဝ ခန့်ကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ သည်ဟု အမေရိကန် လေတပ်မှ ဗိုလ်ချုပ် ပီတာဂါစတန် က ပြောကြား ထားသည်။ အဆိုပါ ညွန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့သည် ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့က ငွေသားများ သိုဝှက်ထားသည့် အီရတ်နိ်ုင်ငံရှိ နေအိမ်တစ်လုံး အပါအဝင် ဂိုဒေါင်များကို ပစ်မှတ်ထား၍ လေကြော
Posted: 27 Apr 2016 10:04 PM PDT
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက် နေ့ ညနေပိုင်းတွင် တနင်္သာရီမြို့ ချောင်းငယ်ရပ်ကွက်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ မတင်မာချိုအား လင်ယောင်္ကျား ဖြစ်သူ ချမ်းအေးအောင်က ကပ်ကျေးဖြင့် လည်ပင်းအား ထိုးသတ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရာ တရားခံအား ဖမ်းဆီး ရမိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသည့် ဒဏ်ရာကြောင့် မတင်မာချိုမှာ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တရားခံဖြစ်သူ ချမ်းအေးအောင်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုဖြင့် ထောင် ၂ကြိမ်
Posted: 27 Apr 2016 06:50 PM PDT
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီ (JMC-U) တို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့နေ့မှာပဲ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ပလောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ အစိုးရတပ်အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကို ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ Photo: Aung Thain Kha/ RFA ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဥပဒေပညာရှင် ၁၃ ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိအောင် နည်းလမ်းရှာဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ တရားရုံးတွေကို စောင့်ကြည့်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲဟာ
Posted: 27 Apr 2016 06:49 PM PDT
ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၆ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခံရသူ သက်မပြည့်သေးသည့် သျှမ်းအမျိုးသမီး အမှု ဆော လျင် စွာဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်း ချက်ပါရှိသည့်ေ ကြငြာချက်တစောင်ကို သျှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေး အသင်း SWAN က ကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းလာရောက်နေထိုင်သော တရုတ် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း ရှင်က မြန်မာပြည်သူ အပေါ်အကြမ်းဖက် စော်ကားနေခြင်း ကို မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှ ထိေ
Posted: 27 Apr 2016 07:11 PM PDT
တောမီးလောင်ထားတဲ့ သစ်တောတစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဧရိယာဟာ ဟက်တာ ၁ ဒသမ ၅ သန်း လျော့နည်းသွားကြောင်း စိမ်းလန်းအမိမြေအသင်းက သုတေသနစစ်တမ်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုနဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေးဧရိယာပြောင်းလဲမှု သုတေသနစစ်တမ်း ထုတ်ပြန်ပွဲကို ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ Shangri-La ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး အဖွဲ့ရဲ့
Posted: 27 Apr 2016 06:44 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင် အပန်းဖြေကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိသျှလူငယ် ၂ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းရဲတွေရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေဟာ လွဲမှားနေတယ်လို့ ပညာရှင်တချို့က ထောက်ပြ ပြောဆိုနေပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ အယူခံတရားရုံးကနေ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ ဒီကိစ္စတွေဟာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ တရားခံတွေရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာ က သတင်းပေး
Credit: US Embassy Rangoon မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scot Marciel ဟာ သူ့ရဲ့ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ မနေ့ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့က အခမ်းအနားနဲ့ ပေးအပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ သံအမတ်ကြီး Scot Marciel ဟာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မ
ကသာ ဧပြီ ၂၇ ကသာမြို့နယ်အနီး၌ ဧရာဝတီမြစ်ရေတိုးလာ၍ မြို့အနီးရှိကျေးရွာများတွင် စိုက်ပျိုးထားသော ဆီထွက်သီးနှံ မြေပဲပင်များ ရေနစ်မြုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြေပဲစိုက်ပျိုးထားသည့် တောင်သူတစ်ဦးက ယခုဧပြီလအတွင်း ဧရာဝတီ မြစ်ရေတိုးခြင်း၊ မြစ်ကမ်းပါးများပြိုကျခြင်းနှင့် စိုက်ခင်းများ ရေနစ်မြုပ်ခြင်းကြောင့် အရှုံးကာမိရေးအတွက် မြေပဲဆန်တစ်တင်းလျှင် ၁၂၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် လုပ်သားများငှားရမ်း၍ မြေပဲများနုတ်ေ
Posted: 27 Apr 2016 06:43 PM PDT
ဒီနှစ် ဇန္နဝါရီ လဆန်းပိုင်းကနေ စတင် ရွေးချယ်ပြီး ဧပြီလကမှ အသစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ပြန်လည် ရွေးချယ်ဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ဧပြီလ (၂၂)ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ အရင်အစိုးရ သက်တမ်းကုန်ခါနီးမှာ အပြီးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစိုးရသစ် တက်တဲ့ ဧပြီလမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အတည်ပြု
အပူလေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း (Heat Stroke)
ပညာရေးသဘောတရားနဲ့ လက်တွေ့နယ်ပယ်အတွေ့အကြုံ (၂)
❝ တီတီသိသမျှ ဂစ်တာအကြောင်း ❞
Telephone Expressions (4)
#‎သုတေသနစာတမ်းများကဏ္ဍ‬ ( ၁၅ ) အုပ်ပါခဗျာ
Blood in Stool စအိုက သွေးယိုခြင်း
“ ရေ ကော်မတီ၊ မီး ကော်မတီ ”
" လျှပ်စစ်၏ သိမ်မွေ့မှုအနုပညာ "
Next pregnancy နောက်ကိုယ်ဝန် ယူချင်သူများ
#‎မောင်ထွန်းသူ‬ စာအုပ်များစုစည်းမှု (၃၉) အုပ်
မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံး ၏ လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု
မီးဖိုချောင်ထဲက စဉ်းတီတုံးကို သတိထား
ကလေးတွေကို အောက်ပါအကျင့်ဆိုး သုံးခု ကို ဖျောက်ပေးပါ။
အမျိုးသား တန်းတူရေး ဗမာပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းရေး သစ်ထွန...
ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးကို ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးရမည့် အချ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ လစ်ဘရယ်ဝါဒ
အစဉ်ကျန်းမာဖို့ သိထားသင့်သော အချိန်များ
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖူးတဲ့ ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့ ဆယ်လီ...
The Finest Hour (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
❖ ကိုငှက် နဲ့ အောင်ရင် ❖
“သဘာဝကျကျ အဖေ” by (ယုယ)
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ်နဲ့ခွဲတဲ့စနစ် ဖျက်သိမ်းလိုက်...
ဘ၀တွင် ပေါ့ပါးစွာ နေထိုင်နည်း အကျဉ်း
ကလေးမယူခင် စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ နဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ...
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ Sex Virus ဝင်ရောက်ကူ...
Ovarian Cyst မျိုးဥအိမ်အကျိတ်
ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်မယ့်သူတွေ စာဖတ်တယ် ခင်မောင်ည...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၄)
ဂျက်ခ်မား က ပြောတာပါ...
''အဖေဆိုသည်မှာ. . . ''
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၂၄)
၂၀၀၈ အကျဉ်းစံ (၁)(၂)(၃)
ခြေသလုံး ချစ်သူ (သုမောင်)
အုန်းရည်သောက်ခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း လစာတိုးရေး လေးချက် အခြေခံ
မုဒိတာနှလုံးသားထဲက တဖိမ့်ဖိမ့် တသိမ့်သိမ့် ယိုစိမ်...
❝ သုမောင်ပြောသော ဂန္တဝင်အနုပညာ ❞ အပိုင်း - ၂
စာကြည့်တိုက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုတယ် ဆောင်းပါးရှင် ...
❝ သုမောင်ပြောသော ဂန္တဝင်အနုပညာ ❞ အပိုင်း - ၁
ဖြစ်တတ်ပေတယ် ဆန်းကျယ်ရာ ။ ခုတ်ရာတစ်ခြား ရှရာတလွှဲပင် !
❝ ကြားဖူးနားဝ ထူးအိမ်သင် ❞
အပြန်အလှန် ပြောစကားများမှ ကောက်နှုတ်ချက်များ (၁၉)
အကယ်ဒမီနှင့် ကျွန်တော် || စိုပြေ ||
ဒေါသ ကင်းရေး (၁၀) ချက်
အရပ်ဘက် - စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး
" ဒီဒုက္ခကနေ ကင်းဝေးချင်လှပါပြီ "
If pattern တွေထဲက first conditional ကို အခြားသော M...
✺ ဖိုးကျော် နှင့် အင်တာဗျူး✺
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်ကို လေးစားဖို့...
အိုင်းစတိုင်း သူ့ဘဝ သူ့အတွေးအခေါ်
ဘူဒိုဇာနဲ့ ရှင်းလို့မရတဲ့ ပြသနာ
“စင်္ကာပူက တက္ကစီသမားကြီး ပြောတဲ့ သူ့ အတွေ့ အကြုံ”